Kairo, inona no ho hitanao ao amin'ny tanàna mandrakizay | Vaovao momba ny dia
Kairo, inona no ho hitanao ao amin'ny tanàna mandrakizay
Mariela Carril | | Cairo, Inona no ho hita
Raha misy tanàna tsy mampino eto amin'izao tontolo izao dia izany no tanàna Cairo. Magical, mistery, mbola manohitra antsika amin'ireo tsangambato taloha ihany izy io ary na dia tsy fotoana tena mety hitsidihana aza dia tsy misy fomba hanesorana azy amin'ny hoavintsika.
Marka, arabe, moske, Neily, Piramida, sambo fitsangantsanganana ary ny Tranombakoka fahagola ejiptiôna no miandry antsika satria na dia indray mandeha isan'andro aza dia tsy maintsy mitsidika an'i Egypte sy ireo zava-mahatalanjona ananany ianao Tsy dia tianao loatra ny toe-draharaha politika ankehitriny ary manana fisalasalana ianao? Hendry ianao, saingy mieritreritra aho fa aorian'ny famakiana ny lahatsoratro androany dia hivadika faniriana ireo fisalasalana ireo. INDRO inona no hitsidika an'i Kairo. Ary inona no tsy tokony hohadinoina.
1 Kairo, zava-misy tokony hotadidina ao an-tsaina
2 Inona no hitsidika an'i Kairo
Kairo, zava-misy tokony hotadidina ao an-tsaina
Na dia tsy tiantsika ny tanàna dia tsy afaka mamakivaky an'i Egypte ny olona raha tsy mandany andro vitsivitsy eto an-drenivohitra, satria io no fomba tsara indrindra hahafantarana sy hiainana ny fiainana ejipsianina sy ny mifanohitra amin'izany. Ny toetrandro dia antonony ary misy hamandoana ambany mandritra ny taona, fa amin'ny fahavaratra dia mety mahasempotra. Mandritra ny volana Jolay dia miakatra hatramin'ny 36 ºC ny thermometre ary manodidina ny 21 ° C ny ambany indrindra. Raha afaka misafidy ianao hoe rahoviana no handeha dia tokony hatao amin'ny volana Janoary satria ny mari-pana dia eo anelanelan'ny 21 ºC sy 15 ºC. Nandritra ny volana martsa, aprily sy jona dia nitsoka avy tao an'efitra ny rivotra Khamaseen ary avy eo nitondra mari-pana sy fasika miakatra.
Betsaka ny toeram-ponenana ao an-tanàna, trano fandraisam-bahiny maherin'ny 75 misy sokajy samihafa ary ny sasany manana fahitana mahafinaritra momba an'i Neily na Piramida. Misy ihany koa ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny mora vidy. Kairo dia manana rafitra fitateram-bahoaka miaraka amin'i minibus, bus ary metro. Tsy misy tsy fahampiana taxi-be koa. Tsy atolotra ny aotobisy satria voasoratra amin'ny teny Arabo ny zava-drehetra ary mikorontana be ihany. Tsy azo atao raha vehivavy ianao. Mora ny mampiasa ny metro ary manana kalesy mitokana ho an'ny lahy sy ny vavy, saingy tsy dia mahatratra ny tanàna manontolo izany. Mazava ho azy fa mora izany.
Afaka mifangaro amin'ny taxi ianao, ny fomba fitaterana tsara indrindra raha mpizahatany ianao. Misy karazana taxi telo, ireo izay tsy misy aircon na metatra fijanonana, (mainty sy antitra), ny fotsy, vaovao kokoa sy maoderina ary misy metatra fijanonana (raha hifidy iray ianao dia avelao izy ireo no farany), ary misy taxi taxi mavo koa saingy tsy maintsy miantso ianao ary mangataka azy ireo an-tariby.
Inona no hitsidika an'i Kairo
Rehefa manolotra fitsidihana sy fitsangatsanganana Sarobidy be ny zavatra niainana, noho izany dia mety tsy mitovy amin'ny an'ny mpizahatany hafa ny tolo-kevitro, fa ny manoratra azy ireo dia nieritreritra ny diako aho, ny an'ny rahavaviko izay nandeha tany sy ny rafozako ihany koa. Fanandramana telo samy hafa amin'ny fotoana samy hafa amin'ny taona, ka heveriko fa ho tolo-kevitra tsara izy ireo ary samy hamaly ny fanontaniana izy rehetra: raha androany no naka olona izay tsy nifindra tongotra akory tao Kairo ianao, aiza no hitondranao azy ireo?
Ny Citadel io no toerana voalohany maka sary avy amin'ny haavo tsara, miaraka amin'ny fomba fijery tsara. Io ilay fanamafisana silamo antonony naorina teo amin'ny havoana Mokkattam ary mangatsiatsiaka kokoa noho ny afovoan-tanàna. Ny fiarovana azy dia natsangana tamin'ny taonjato faha-85 handroahana ny Crusaders ary ivon'ny governemanta no nisy azy io. Izy dia manana ny fanitsiana maro an'i Saladino el Grande sy ny loharano lalina XNUMX metatra izay azontsika ankasitrahana ankehitriny.
Taty aoriana ny Ottoman dia nanangana moske ary nanao fananganana vaovao ary mandraka androany misy tranombakoka efatra: ny tranom-bakoka, ny tranom-bakoka miaramila egyptiana, ny mozea polisy polisy egyptiana ary ny tranombakoka ao amin'ny lapan'ny Al-Gawhara. Eo am-pototr'izy io dia misy tambajotra arabe, zotra sy moskea.
Miresaka tranombakoka ny Tranombakoka ejiptiana any Kairo Toerana tsy azo ihodivirana izy io: manana ny fanangonana antitra fahagola egyptiana lehibe indrindra misy zavatra mihoatra ny 120 izy, na dia tsy ny rehetra aza no aseho. Tranombakoka hafa mifanila aminy no toa miafina ao amin'ny trano fitehirizany. Miorina ny tranombakoka ao amin'ny Kianja Tahrir ary niaritra fahasimbana sy halatra vitsivitsy tamin'ny fikomiana 2011. Mahamenatra. Ny rihana dia misy gorodona roa misy papyri sy vola madinika taloha nolokoina tamin'ny volafotsy, varahina sy volamena, sarivongana, takelaka, sarcophagi ary zavatra an-jatony avy amin'ny fasana pharaonic.
Misokatra isan'andro ity tranombakoka ity manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 hariva ary mandritra ny Ramadam dia mikatona amin'ny 5 hariva Ny fidirana dia LE 60 isaky ny olon-dehibe ary LE 30 isaky ny mpianatra, fa mandoa vola fanampiny ianao ho an'ny efitrano sasany toy ny Royal Mummies Hall (LE 100) sy ny Centennial Gallery, LE 10. Ny tranombakoka dia ao amin'ny faritry Wust el balad, afovoany, toerana tsara hankafizana ny fiainana amin'ny alina eto an-drenivohitra Egyptianina.
Toerana iray hafa tsara hisakafoanana maraina ary hijerena ny filentehan'ny masoandro manatrika ny Piramida dia ny Valan-javaboary Al Azhar. Tena zaridaina lehibe izy io ary fanomezana avy amin'i Agha Khan IV tamin'ny taona 80. Mbola eo an-dàlam-pandrosoana izy io fa toerana mety tsara hankafizana ny filentehan'ny masoandro. Etsy ankilany misy koa Kairo Coptic, tranokala misy fasana sy fiangonana Kristiana izay mampatsiahy tampoka anao ny fisian'ny Kristianisma. Hafahafa.
Ny zoro iray hafa dia Kairo Silamo izay vita tamin'ny famerenana tamin'ny laoniny vao tsy ela akory izay. Izy io dia karazana tranombakoka Silamo an-kalamanjana. Misy ny Moske Ibn Tulun, tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny tranombakoka Gayer-Andernson izay miasa ao amin'ny tranon'ny mpivarotra Ottoman tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Raha resaka fiantsenana ny Tsenan'i Khan el-Khalili Izy io dia iray amin'ireo tsena mahafinaritra indrindra eto an-tany. Voasarona izy io ary nanomboka tamin'ny 1382. Io no ivon'ny varotra zava-manitra ary bazaar mahafinaritra izay ahafahanao mividy kely ny zava-drehetra ankehitriny, manomboka amin'ny menaka esansiela ka hatramin'ny jeans. Azonao atao ny mamita ny diany amin'ny dite ao amin'ny Fishawi's Cafeteria, iray amin'ireo kafe tranainy indrindra eto an-tanàna.
Mandehandeha manamorona ny onin'i Neily ao a felucca soso-kevitra izany. Azonao atao ny manakarama azy ireo eo amin'ny sisiny manoloana ny Hotely Four Seasons. Mazava ho azy, ao amin'ny renivohitr'i Egypt dia misy tranombakoka maro hafa: ny Museum of Agriculture, the Museum Museum, the Railway Museum, the Military Museum, the Qasr Al-Eini Medical Museum ary lapa maro. Holazaiko amin'ity lafiny ity fa mifototra amin'ny zavatra mahaliana anao, mandrindra fitsidihana tranombakoka vitsivitsy hafa.
Nitsidika ny Villa an'ny Faraona. Izy io dia tranombakoka eo amin'ny sisin'ny afovoan-tany izay mamela anao hanao a dia mandeha telo arivo taona lasa izay. Mandeha lakandrano mitaingina sambo maotera ianao ary karazana izany zaridaina fialamboly manan-tantara izay mamorona trano, lapa ary tempoly. Raha mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao dia io no fomba tsara indrindra ampitana azy ireo ny tantara. Ary mazava ho azy fa namangy ireo piramida ihany koa aho, tranonkala iray izay toa maloto be tamiko.
Inona no torohevitra omeko anao amin'izany, la fitsidihana any Kairo? Mety ny mandeha mitsidika ny Piramidan'i Giza. Eny, fantatro, tsy tianao izany, fa aleo toy izao. Raha mandeha samirery ianao dia tsy maintsy mifanakalo hevitra amin'ilay taxi-be mitondra anao ary te-hamory anao amin'izay tadiaviny izy ireo. Raha mbola te-handeha irery ianao dia tokony handray ny metro mankany amin'ny gara Giza ary avy eo maka ny minibus. Izy io dia mora kokoa.
Ny fahitana ny Piramidan'i Giza dia karatra paositry ny fahagola sy ankehitriny. Inona no tiako holazaina? Manao fikarohana ao amin'ny Google ianao raha mahita sary dia hahita karatra paositaly an'arivony marobe amin'ireo piramida fa tsy misy toa ny mahita azy ireo mivantana. Ny ampahany dia satria mahafinaritra izy ireo fa ny ampahany kosa satria eo amin'ny lafiny izay tsy miseho velively amin'ny sary dia misy mpifanila trano iray manontolo: trano sy trano ary koa Pizza Pizza eo alohan'ny Sphinx. Azonao inoana ve izany? Fanatontoloana!
Tsy maintsy mampitandrina anao momba izany aho mitaingina rameva: mahatsiravina ny mpamily, hanenjika anao amin'ny fanontaniana izy ireo ary hanome anao ny vidiny samihafa arakaraka ny firenena niavianao. Hilaza aminao koa izy ireo fa voarara ny mandeha anelanelan'ny piramida, ianao rehetra dia manakarama tongotra. Ary misy ny mpivarotra ny zavatra vita amin'ny China na aiza na aiza.
Tsy nanana traikefa ratsy tamin'ny polisy sy ny mpiambina tao an-toerana aho, saingy tsy vitsy ny tatitra momba ireo mpizahatany izay voafitak'ireto mpiasa ireto ihany. Torohevitro: aza matoky azy ireo koa, samy mila vola daholo. Ny marina dia toerana mahafinaritra miaraka amin'ny olona ratsy fanahy sasany, izay te-hahazo vola aminao ary manararaotra ny toeran'ny fizahantany anao. Mampatahotra. Izany rehetra izany raha mandeha irery ianao. Izany dia mihoatra ny latsaka ny zava-nitranga tamiko sy ny rahavaviko satria ny rafozako, izay nanao fitsangantsanganana, dia nanana zavatra hafa niainany.
Mazava ho azy, tsy misy olona afaka mandao an'i Giza raha tsy misy midira ao amin'ny Great Pyramid, mitsidika ny Museum Solar Boat, mandiniha ny Sphinx ary raha vitanao dia vavao ny Fampisehoana feo sy hazavana. Mazava ho azy fa ny fitsangatsanganana tanteraka any Kairo dia tokony ahitana fitsangatsanganana sy fitsangatsanganana, Luxor, Abu Simbel ary ireo karazana toeran-kaleha ireo. Amin'ny fotoana hafa dia hiresaka momba ireo fitsangatsanganana ireo izahay. Ny zava-dehibe anio dia izay azontsika atao any Kairo ary fantatsika fa, raha vehivavy irery isika, dia tsy hanana fotoana mahafinaritra toy izany.
Tsy firenena fitsangatsanganana irery i EgyptMijery anao matetika izy ireo ary mampatahotra anao. Ny mieritreritra fa mieritreritra izy ireo fa satria irery ianao dia saika mpivaro-tena dia tsy manampy firy. Mitandrina!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Cairo » Kairo, inona no ho hitanao ao amin'ny tanàna mandrakizay
Las Loras, tontolo jeolojika tokana any Espana